January 2015 - iftineducation.com
Maxay waayahan USO bateen raga kiniinka galmada Cuna….?
aadan21 / January 31, 2015
iftineducation.com – Maxay waayahan USO bateen raga kiniinka galmada Cuna ? Arintaan oo dad badan soo weydiyeen shakada shumis.net ayaa waxaan jawaabta oo sahlan ugu soo bandhigaynaa halkaan si ay dad badan ugu faa ideystaan. runtii dhoor mar ayey shabakada shumis ugu diktay dhalinyarada iney iska joojiyaan siigada badan tan oo keenya hadhoww markaad guursato iney yaraato awooda galmadaada. taas ayaana…
Shamso Food Oo Mukulaal Ama Bisad Hees U Samaysay (Daawo Muuqaalka Heesta)
iftineducation.com – Fananada Shamso Food ,ayaa ka yabisay dadka fanka xiiseyo ka dib markii hees ay u soo samaysay Mukulaal ama Bisad heestaan oo aheed hees Niiko ah. Fanka hore ayaa lagu heesi jiray Geel iyo Faras lakiin fankii qurbaha ayaa noqday fan wax walbo loo adeegsado waxaana arkaysaa heeso aan ku salaysneen dhaqanka iyo hidaha fanka Soomaliyeed . Heestaan cusub…
Daawo Muuqaalka Sanadka Iyo Somali Si Aan Caadi Ahayn U Baashaalaysa
iftineducation.com – Daawo Muuqaalka Sanadka Iyo Somali Si Aan Caadi Ahayn U Baashaalaysa. Waxaan halkaan idin kugu soo bandhigaynaa muuqaal aad uu xiisa badan iyo Soomaali si la yaab leh u baashaalaysa. Waa hubaal inaad ka heli doontaan muuqaalkaan ee daawasho wacan: Halkaan ka daawo video-ga:
Ceebta ku dhacday Fanaanadan Nala daawo Muuqaalkan
iftineducation.com – Warbaahinta ceeldheer.com ayaa kuu haysa Muuqaal kaa xanaajin doona kaasi oo Fanaanada Hodan Afrika ay Soo saartay markii hees soomaali ah ay u gacan galisay Koox madow ah niikina u badalay dheesha soomaalida. RIIX HALKAAN SI AAD U DAAWATO HEESTAASI
Alfanaan mustafa rasta oo ka baxay fanka kadib mucjiso uu arkay Daawo wareysiga universaltv
iftineducation.com – Fanaanka caanka ah Mustafa Rasta oo Dhawaan soo saaray hees ay malaayiin soomaali ah ay ka qeyliyeen sababta Qaabka uu ujilay heesta oo ahaa qaab qaawni ah Waxaana muuqaalkaas duray oo wax ka sheegay abwaano iyo wax garad kale oo soomaali ah. intaa ka dib Fanaanka ayaa go’aansaday in uu gebi ahaanba isaga fariisto fanka maadaama ay dhibsadeen inta…
iftineducation.com – Waxaan halkaan uga hadlaynaa sidee la isaga daaweeyo biyo baxa deg deg ah. -Waxa jira taba bar nafsaani oo aad isaga daaweyn karto biyo baxa deg deg ah, waxaana lagu magacaabaa Kegel Excercise. tababarkaan waxaa lagu dheeraayaa mudada biyo baxa iyadoo la isku dayo in la joojiyo dibne loo bilaabo galmada dhawr jeer. Kegel Excercise ayaa lagu xoojiyaa murqaha…
hada video gaan daawato caawa wax kaa fakanaayo maleh
iftineducation.com – hada video gaan daawato caawa wax kaa fakanaayo maleh Riix halkaan daawo top video
DAAWO MUUQAALKA: Maxaad ka taqaanaa gabadha ugu quruxda badan Dumarka Soomaaliyeed ee qurbaha kunool
iftineducation.com – DAAWO MUUQAALKA: Maxaad ka taqaanaa gabadha ugu quruxda badan Dumarka Soomaaliyeed ee qurbaha kunool, Mase ogtahay in gabadhaasi ay ka daba dhaceen dhamaan raga iyo dumarka soomaaliyeed kuwooda qurba joogta ah, Waxaase la yaab leh markii aan indhaheyga saaray Rag iyo dumar dhahaaya waxaan ka imaanay qaarada fog ee Australia si aan u aragno oo ula kulano gabadhaasi quruxda…
iftineducation.com – Madaxweynaha Somalia Hasan Sh. Mohamud iyo raysal wasaaraha Sweden Stefan Löfven ayaa markii ugu horeysay kulmay, iyagoo ka wada hadlay arimo badan oo ay ka midtahay taageerada dowlada Sweden ay siinayso dowlada Somalia, xaalada amaanka wadanka iyo doorashada Somalia ka dhici doonta. Kulanka ayaa ka dhacday magaalada Addis Ababa. Intii uu labada hogaamiyaha u socday wada hadalka ayaa laysku…
Doowlada Soomaaliya oo joojisay Howlihii shidaal baarista ee P/land ka socday
iftineducation.com – Bayaan cad oo kasoo baxay shirkada Red Emberor ee howlaha shidaal baarista ka waday deegaanada Puntland, ayaa lagu sheegay iney joojisay dhamaan howlahaas. Bayaanka kasoo baxay shirkada Red Emberor, ayaa lagu sheegay ineey tix galineeyso hadal dhawaan kasoo yeeray wasiirkii hore ee Tamarta Doowlada Federaalka Daa’uud Bisinle, kaasoo ahaa inaan shidaal laga baari karin gudaha dalka iyadoon ruqsad laga…